लकडाउन अवधिमा ७८ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न भित्रियो - Arthakoartha.com
काठमाडौं, ११ वैशाख । लकडाउन शुरू भएयता २९ दिनमा ७८ हजार ५७८ मेट्रिकटन (मेटन) खाद्यान्न आयात भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत चैत ११ देखि यही वैशाख १० गतेसम्म उक्त परिमाण बराबरको खाद्यान्न आपूर्ति भएको राससमा उल्लेख छ ।
उक्त अवधिमा २४ हजार २१८ मेटन दलहन, ४० हजार ९९ मेटन तरकारी, १० हजार ८१८ मेटन फलफूल र १० हजार ९९६ मेटन दुग्धजन्य पदार्थ आयात गरिएको छ । त्यस्तै रू. ९७ करोड ६९ लाख ७६ हजार बराबरको तयारी औषधि र रू. २१ करोड ९१ लाख १६ हजार बराबरको कच्चापदार्थ पैठारी भएको छ ।
लकडाउनको पहिलो साताको तुलनामा दोस्रो र तेस्रो साता आयात बढेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तेस्रो हप्तामा खाद्यान्न, दुग्धजन्य पदार्थ र तयारी औषधिको आयात बढेको छ । दलहन, तरकारी, फलफूल र औषधिको कच्चापदार्थ आयात घटेको छ ।
सो अवधिमा दुग्धजन्य पदार्थको आयात सबैभन्दा बढी ११७ दशमलव ४ प्रतिशत बढेको छ । त्यसपछि तयारी औषधि ६८ दशमलव ८ प्रतिशत र खाद्यान्न ३७ दशमलव ७ प्रतिशत बढेको छ । तर फलफूल ३४ दशमलव ३ प्रतिशत, दलहन २४ दशमलव ४ प्रतिशत, तरकारी ४ दशमलव ५ प्रतिशत र औषधिको कच्चा पदार्थ २ प्रतिशत घटेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको शाखा कार्यालय ढुङ्गेधारा नर्सरी चोकमा